Warqad furan dhammaan walaalaha Afrikaanka ah / Waalidka: maxay u rabaan inay noqdaan caddaan madaxa sare ee madow iyo madow muraayadda iyo lugaha? Runtii waa ceeb
Posted By: Admi1waa: Agoosto 25, 2018 00: 35 4 Comments
Maxaa aanad garanayn? Xitaa kuwa caddaanka ah, oo aad rabto inaad u egtahay, waxaad dooneysaa oo diyaar u tahay wax kasta oo qaddarin leh fadhiyada qorraxda, timaha si aad u ekaato adiga ... Maxay tahay sababta isku-dhacani?
Tan iyo markii ay soo bexeen qufulada reer Brazil, dhamaan walaashayda Afrikaan / Madoow, xitaa hooyooyinka waaween. Qosolka, waxaan ku xirnaa qufulkani inay ubadkooda ... Waa maxay xishood ... Waxaanuna la yaabnay dhammaan cuduradan na soo garaacaya, kansarka nooc kasta leh, xiisad kacsan, istaroog, iwm. ... Waan socdaa ... Waa ceeb!
Jaahilnimadu way dili kartaa; je waxaad si fudud u tiraahdaa; waxa aanad garanayn ???? Waa xaqiiqda in madaxu uu neefsanayo, iyo timaheena timaha, ay yihiin anteenooyin ku xiran gariirka iyo tamarta dhulka isla markaana aad go’aansato inaad naftaada go'do ... Marka iska ilaal khasaaraha.
by, Theophane A. Sofonnou
Dadka madow ee reer Yemen, ee la yaso, iyo kuwa aan la taaban karin ee Yemen: waxay isku magacaabaan "Muhammasheen" Ama "La takooray", oo ah qowmiyado madoow oo qarniyo badan jiray, ayaa iska dhigaya meesha ugu sarreysa jaranjarada bulshada. Yaman ka yimid, wuxuu la kulmay takoorid iyo cunsurinimo, kooxo kalena wuu quudhsaday
Jooji isticmaalka timo been abuur ah
Reply in manttah
Haa, waa inaanu ku faannaa timahaaga! KINKY, NAPPY HAIR WAX KA HELI KARAA!
Reply in Linda
U sheeg iyaga
Sep29 04: 56